Ụdị | November 2021
Ụzọ 10 iji eyi jeans na -acha ọcha n'oge oyi niile
2021 | ẸNam Ekese Paul Adams | Atiya: Ụdị
Ọ dịla anya anyị kwụsịrị iwu 'enweghị ọcha mgbe ụbọchị ọrụ'. Ma enwere otu ezigbo ụzọ iji mebie iwu ahụ: denim. Ọ bụ ezie na jeans na-acha ọcha nwere ike ọ gaghị adị mma mgbe niile maka ndị na-aga gburugburu ọfịs eji ejiji kwa ụtụtụ, anya nwere ike ịbịkọta ọnụ na ahaziri ya karịa ụfọdụ blues mara mma. Yabụ, anyị na-ejigide oge ọkọchị kachasị amasị anyị maka oge oyi, anyị na-elekwa anya ụdị uru dị n'okpuru maka mkpali ekike ihu igwe oyi. Ihe Navy Pair akpụkpọ jeans na -acha ọbara ọbara nwere ọmarịcha swiiti turtleneck. Maka ụbọchị oyi na-atụ, tinye akwa mkpuchi ajị anụ dị mma. Abụ nke Style Maka ihu igwe dị nro, jiri denim nkwonkwo ụkwụ gị na jaket moto na -enwu gbaa mee denim ọcha gị. Site na Ịhụnanya Site na Kat Maka ọnọdụ ọfịs nkịtị, denim nwere ogologo nkwonkwo ụkwụ nwere sweta cashmere isi awọ na ikiri ụkwụ nwere mkpịsị ụkwụ. Ụlọ dị n'ugwu, Ma ị na -aga ọrụ, n'abali, ma ọ bụ gị na ndị enyi gị na -arunụ mmanya, jikọta oke oyi n'oge a na akwa jeans, uwe elu, na jaket a kpụrụ akpụ. Snapshots nke Sofi Jidesie ike na klaasị ya na akwa jeans, uwe oyi na -anọpụ iche, peacoat, na obere ụlọ ojii. Luella & June N'iji denim gị dị ka ntọala, gwakọta ndo dị iche iche
Nordstrom Epic Ọkara Ọkara Afọ: Ihe Ịzụta
Nke a bụ ihe ị ga-azụta n'aka Nordstrom's Half-Kwa Afọ, nke na-amalite taa wee gafee na June 3.
Kwụsị ndị na-ehicha ihe: ndụmọdụ ndị ọkachamara gbasara ịsacha akwa mmiri gị
Maka na m dị njikere ịkụ nzọ na ị nụla ya otu narị mana mana ekweghị m ya, aga m ekwu ya ọzọ: Ịsa aka site na aka dị mfe karịa ka ị chere na ọ bara uru nke ukwuu maka ịgbatị ndụ, ụdị, na ịdịmma nke uwe gị. Oge Sweater dị nso nke na m nwere ike ịnụ isi ya, na ihe ụtọ niile a ga-eme n'ọdịnihu na-etinye na ajị anụ, cashmere na ngwakọta owu kacha amasị gị nwere: akụkụ gị kachasị amasị gị ga-achọ ịsa ahụ tupu ezumike. A bụ m onye na-asacha aka-amaara m isi ihe, mana oge ọ bụla m na-agba mmiri wee wụnye ncha, enwere m nchegbu na m na-eme ihe adịghị mma. Iji dokwuo anya, akpọrọ m onye ọka iwu, onye nrụpụta San Francisco Margaret O'Leary, wee mee ka ọ gafere usoro kwesịrị ekwesị. Nzọụkwụ #1: Tụgharịa sweta n'ime. Ọ kọwara, 'Nke a na -ebelata esemokwu na ga -egbochi yarn ka ọ ghara ịkwa akwa.' Nzọụkwụ #2: Were mmiri na ncha jupụta ebe a na -asa mmiri. Hụ na sink gị dị ọcha, wee were ncha na mmiri oyi jujuo ya nha. Ncha Margaret maka cashmere na uwe ndị ọzọ bụ ncha ntutu na-esi ísì ụtọ sitere na EO nke ọ na-azụta na nri niile. Nzọụkwụ #3: Sụchaa. Hapụ ihe
23 Nnukwu onye nrụpụta ego dị ala sitere na ire ahịa outnet
Ire ọpụpụ nke oge opupu ihe ubi nke Outnet dị ebe a, anyị wee buru ụzọ gaa na iberibe ndị nrụpụta kacha mma iji melite kaboodu gị. Ụlọ ahịa Victoria Beckham, Derek Lam, na ndị ọzọ.
Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu maka ụlọ ahịa obere akpa enyi J.Crew, Mercantile
Hụ ụdịdị J.Crew n'anya mana anaghị ahụ mkpado ọnụahịa n'anya? Ụlọ ọrụ ahụ na -akwado iwebata gị J.Crew Mercantile, na -abịa mgbe ọnwa a gasịrị (nke mbụ ga -emepe na ụlọ ahịa dị na Park Lane na Dallas, dị ka WWD si kwuo). Echiche ụlọ ahịa ahụ yiri nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ika ahụ, ọ ga-erekwa otu ngwaahịa ahụ: iberibe emepụtara maka ụlọ ahịa dị ọnụ ala yana dị ọnụ ala karịa ihe ị ga-ahụ na J.Crew mara mma. Onye na -ere ahịa, dị ka ebe a na -ere ahịa, agaghị ere Crew ọ bụla. Ọzọkwa, atụla anya ị nweta oke ego dị omimi nke ihe ị hụrụ na katalọgụ ọnwa isii gara aga. Akara a na -ata ahụhụ ụfọdụ nsogbu ego ka oge na -aga, na -akọ na mfu efu ruru $ 462.4 nde maka nkeji iri na ise nke kwụsịrị na Mee. Ewezugakwara ndị ọrụ n'ike n'oge ọkọchị a, gụnyere ngbanwe nke onye isi atụmatụ ụmụ nwanyị, Tom Mora, na Somsack Sikhounmuong (nke sitere na Madewell). Ihe ịma jijiji niile a, agwakọtara ọnụ ọgụgụ na-adịghị mma, nwere ike ịkọwa ihe kpatara ugbu a bụ oge iji kpalie Mercantile. Na mbụ, ụlọ ọrụ ahụ dọbara uche mgbe ọ debara aha aha Mercantile laa azụ n'ọnwa Mee afọ gara aga. Buzz malitere na ọ bụ maka
Ejiji Fall 20 na -achọta Cali kwụ ọtọ nke nwa agbọghọ ọ bụla ga -enwerịrị
Emeela m ka m mata akara ọdịda ọdịda gals dị na mpaghara ọ bụla, ha niile sitere na steeti California.
Anya 30 kacha mma sitere na Met Met 2018
Lelee ndị na-eme ememme kacha eji ejiji kapeeti 2018 Met Gala, site na Zendaya ruo Rihanna.
Etu ị ga -esi eyi akwa flannel n'oge oge ọ bụla
Ekechiri, ekechi, ma ọ bụ naanị ya, ndị ama ama gụnyere ụmụnne Hadid na Kendall Jenner na-egosi gị otu esi eyi flannel kwa afọ.
Ọmarịcha ụzọ iji yie uwe elu gị kachasị mma, kwụ ọtọ site n'ahịrị ihu Burberry
Ana m ebi maka echiche a dị mfe, nke na-adị mma mgbe niile site na nchịkọta Burberry ọdịda 2012, nke Michelle Dockery na Giorgia Surina na-eyi na ngosi uwe ụmụ nwanyị 2013.
Ihe ị ga-eyi na-arụ ọrụ echi: Cardigan, Tee dị gịrịị, na akwa akwa
Ọ bụrụ na ị naghị eyiri yunifọm n'ebe ọrụ, ijikere maka ọfịs nwere ike ịbụ ule ntachi obi kwa ụbọchị. Ma atụla egwu! N'uhuruchi ọ bụla n'elekere 10 nke abalị, anyị na-ewetara gị echiche uwe dị mfe ma dị mma iji zaa ajụjụ na-adịgide adịgide 'gịnị ka m ga-eyi maka ọfịs?' Kaadị Cardigan, Tee dị gịrịị, na Pant-Waist Pantị: Wepụ cardigan, akwa tank dị gịrịgịrị na uwe ogologo ọkpa na-egbuke egbuke. Mpempe ụkwụ peep-toe na-ekwughachi ụdịdị nke anya a. Kedu ihe ị na -eyi ịrụ ọrụ echi? Kekọrịta foto gị na Instagram site na ịkpado @glamourmag na iji hashtag #officeoutfit. Na mgbakwunye, lelee ebe anyị na -eche echiche uwe maka aro ndị ọzọ!
Aldo na-eji akara ahịrị-ọgbara ọhụrụ ebuso ọdịda a ọdịda
N'ọnwa Septemba, a ga -enwe ihe ọhụrụ kpatara ịzụ ahịa akpụkpọ ụkwụ na akpa na Target. Malite n'izu nke Septemba 6 akara ahụ ga-amalite ịkwakọba A+, ahịrị ọhụrụ nke akpụkpọ ụkwụ na akpa sitere na Aldo Group. Akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke, gbakwunyere ọtụtụ satchels na totes, ga -ere ahịa n'etiti $ 25 na $ 60. Ndị na -azụ ahịa nwere mmasị nwere ike lelee ihe niile na ụlọ ahịa Target na n'ịntanetị, yana nhọrọ na saịtị Aldo. Ọ dị mkpa ịmara na nke a bụ imepụta ụdị ọhụụ, ọ bụghị imekọ ihe ọnụ. A ga -echekwa ngwaahịa n'akụkụ ụdị Target ndị ọzọ (Merona, Xhilaration) ma ga -adị mgbe niile. Mkpakọrịta onye nrụpụta ọhụrụ nke Target, na ozi ndị ọzọ, bụ onyinye sitere na Adam Lippes, gbakwunyere ebe nlebara anya tchotkes na ihe ụlọ. Nke a bụ ihe anyị nwere ike ịtụ anya n'aka A+: A+ 'Melody,' $ 45 A+ 'Isa,' $ 45 A+ 'Kellen,' $ 33 A+ 'Jackie,' $ 25 A+ satchel, $ 45 A+ nnukwu obe, $ 40 A+ tote, $ 45 Ị nyochala site na mmekorita mmebe zuru oke nke Target?
Anya ọ bụla na-ele anya site na mmekorita nha nke Jason Wu na Eloquii
Eloquii x Jason Wu nke a na-atụ anya nke ukwuu maka ezumike- na ịdị njikere maka oriri mechara daa taa. Lee ma zụọ ahịa ibe ọ bụla ebe a.
Na-ewetara akpụkpọ ụkwụ mmiri mmiri ga-azụrịrị ahịa site na ...
Abụ m ụdị onye na -ahụ maka tankị Shark, ọ na -amasịkwa m ịhụ ihe niile na -agafe n'ọnụ ụzọ abụọ ahụ. Ụfọdụ na -agba ara, ụfọdụ nwere ọgụgụ isi, na ole na ole na -eme ka m chọọ iru maka laptọọpụ m wee chọpụta ozi ndị ọzọ. Nke a bụ ikpe maka akpụkpọ ụkwụ rịbọn dị iche iche sitere na Sseko Designs. Akpụkpọ ụkwụ Gladiator ga -enwe nnukwu oge na oge opupu ihe ubi na ọkọchị a, m abanyela kpamkpam. Ọ masịrị m ụlọ mara mma nke na -arụ ọrụ na ihe niile dị n'ime kaboodu m, site na jeans ruo akwa anwụ anwụ, kedu ka ụmụ okorobịa a si dị mma na ị nwere ike kee ụzọ ọ bụla? Enwerekwa akụkụ dị mma-ika ahụ na-eji otu ụmụ nwanyị nọ na Uganda na-arụ ọrụ maka ụgwọ ọnwa nke ga-akwado nrọ ha nke ịga mahadum. Ụdị lace na -acha ọcha bụ ọkacha mmasị m, mana adọtakwara m na oroma a na -enwu gbaa (ma ị nwere ike kee ha abụọ n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche). Ụlọ ahịa 'em ebe a. Enwere ndị ọkwọ ụgbọ ala Shark ọzọ nọ ebe ahụ? Ị zụrụla ihe ọ bụla mgbe ị hụrụ ya na ihe nkiri?
Na -agbaji: Taylor Swift gburu ya na White Balmain Jumpsuit na Billboard Awards
Taylor Swift na -acha ọcha Balmain jumpsuit na Billboard Music Awards n'abalị a nwere ike bụrụ akara kacha ọhụrụ nke ụdị iwe ya na -arịwanye elu. Ozizi anyị bụ na o nwere ihe jikọrọ ya na Calvin Harris mara mma, mana anyị enwetaghị ọmarịcha ọmarịcha ha na -ejikọ kapeeti uhie ọnụ. Ọ gara na ya solo, ebe Tay gosipụtara ma were foto nke enyi nwanyị gụnyere Hailee Steinfeld, Lily Aldridge, na Zendaya. Site na vidiyo ọhụrụ ya maka 'Ọbara Ọjọọ' na-ebu ụzọ na mbido ihe nkiri ahụ, ọ dị mkpa na ọ mara mma nke ukwuu, ọ nweghịkwa ndakpọ olileanya. Ndị enyi nwanyị niile ahụ ka ya na ya jiri kapeeti soro? Kpamkpam na vidiyo. Taylor na -eji ihe na -eme sexy eme ihe a - uwe ejiji ya maka 1989 na -ama jijiji.
Uwe otu iri atọ na otu kacha mma nke oge niile, site na ejiji ruo n'ọmarịcha omenala
Uwe oriri kacha mma na -adị iche iche dị ka ụmụ nwanyị na -eyi ha. Anyị na -eleghachi anya azụ na ụfọdụ n'ime ihe kacha ochie, site n'ikike ndị ama ama.
Ihe nzuzo 4 nke ị nwere ike ịmụta site na Solange (Taa bụ ụbọchị ọmụmụ ya!)
Soro m na -achọ Solange nnukwu ụbọchị ọmụmụ, ọ bụghị gị? Onye ọbụ abụ/nne/fashionista na -atụgharị afọ 27 taa, na ime ememme echere m na ọ bụ ihe dabara adaba ileghachi anya azụ n'ụdị nkuzi ọ kụziiri anyị n'afọ gara aga. Kwadoro, ugbua: Solange ahụtụbeghị uwe ọ masịghị ya na ọ nwere ezi ihe kpatara ya: ha dị mfe ijikọ ọnụ ma na -adị ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na mbinye aka ya yiri ka ọ bụ ụdị mbipụta pụtara ọfụma, ị nwere ike mee ka omume a bụrụ nke gị site n'ịtụgharị ụdị ojii siri ike ma ọ bụ nke ndị agha mmiri. Debe otu ụzọ nfuli na -enwu enwu n'aka: ị gaghị ama mgbe ị nwere ike iji ha mee ka uwe monochromatic dị ụtọ. Ọmụmaatụ: Solo weere Roberto Cavalli na-acha ọcha na-ele anya n'ọkwa na-esote ya na akpụkpọ ụkwụ ikiri ụkwụ mara mma. Nabata agba maka ihe omume abalị: Lee ọ nọ na Vanity Fair's Oscar mgbe ememme. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọzọ jiri uwe ojii ma ọ bụ ọcha ọdịnala maka oriri ahụ, onye ọbụ abụ kwuru nkwupụta na-acha odo odo. Ihe njide Lucite bụ akpa ahụ ọhụrụ: nwa oge, nwa agbọghọ ọ bụla mara mma na-ebu akpa ozu maka abalị abalị na-apụ n'obodo ahụ, mana ugbu a ọ bụ ihe gbasara njigide doro anya. Debe ya na obere akpa na -enwu enwu, ma kwakọta
Ụzọ 4 iji kpuchie aka gị (n'ụdị GIF!)
N'ime usoro akụkụ anọ a, anyị ga -egosi gị ka ị ga -esi jiri hacks dị mfe bulie akụkụ dị mma nke iberibe kwa ụbọchị. N’izu a, anyị na-elekwasị anya n’otú anyị ga-esi kpoo aka uwe elu dị ala. Ihe nkpuchi isi: kpatụ bọtịnụ abụọ ahụ, tụgharịa aka otu ugboro na nkwojiaka. Nyefee aka ọzọ n'ihu aka. Tinyegharịa na ogwe aka ọzọ. The Stylish Cuff: Mepee bọtịnụ kọfị niile. Kpoo aka uwe elu, ozugbo n'elu ikpere gị. Kpoo aka uwe ahụ ọzọ, na -ekwe ka ụfọdụ ihe mkpuchi ahụ wee banye n'ime. Tinyegharịa na ogwe aka ọzọ. Ka anyị nweta ọrụ na-arụ ọrụ: Gbanye aka uwe ya ka ọ dị n'okpuru isi ogwe aka gị. Pịfee aka uwe fọdụrụ na ogo gị kachasị amasị gị. Tinyegharịa na ogwe aka ọzọ. Ihe na-apụ apụ ọrụ: Kpachapụ mkpuchi abụọ ma jiri nwayọ tụgharịa aka uwe gị ugboro ole na ole n'ogo achọrọ na ọkpọ aka. Tinyegharịa na ogwe aka ọzọ. Laghachi azụ n'izu na -abịa mgbe anyị ga -edozi otu esi ejikọ akwa jeans gị!
Uwe ụlọ 15 na -eje ozi nkasi obi kachasị elu
Site na nkwanye ugwu, ị ga -enweta ego azụmaahịa gị niile. Zụta uwe ụlọ kacha mma site na ndị efu, Net-a-Porter na ASOS iji malite inweta ego ugbu a.
Ndụmọdụ 6 maka ịzụ ahịa bra mgbe ị nwere nnukwu ara
Ndị ọkachamara ime ụlọ na -agwa 'Glamour' ndụmọdụ nzuzu ha maka ịzụrụ akwa ara mgbe ị nwere ara. Hụ ndụmọdụ ha maka onye ahịa DDD+.
Onyinye ụlọ 19 ị nwere ike ịzụ ahịa ugbu a wee nwee site na mgbede ekeresimesi
Onyinye ndị a na-eche nke ọma, ọ bụghị nkeji ikpeazụ, ma na-enye onyinye onye nnabata kacha mma, ma ọ bụrụ na mkpebi Afọ Ọhụrụ gị gụnyere ịbịa nnọkọ mmekọrịta ndị ọzọ.
ka esi eme mma na etemeete
ogologo oge ka juvederm lip filler na -adịru
ekeresimesi onyinye maka nne ọhụrụ